Radish Red Color, Radish Red Suppliers, Soosaarayaasha Midabka Casaanka Radish, Dhoofiyeyaasha Xalalka Casaanka ah
[Ku saabsan Radish Red]
Radish Red Color waxaa laga soo saaray xididdada Red Radish ee la cuni karo ee qoyska Cruciferae. Midabku wuxuu badanaa ka kooban yahay laba anthocyanins, oo iska leh waxyaabo ka soo jeeda gulukooska ee Pelargonidin.
Radish Red Color, midab biyo saafi ah oo dabiici ah iyo biyo milmay oo ay soosaartay shirkadeena waxaa loo isticmaalaa PAPHANUS SATIOUSL FUEING (qolof casaan iyo wadnaha wadnaha cas) oo leh taariikh dheer oo beeritaan 1ocally Nidaamka waxaa lagu hubinayaa ， dhaqid ， jarjarid, soo saarid, shaandheyn, nadiifinta, xoojinta, buufinta, qallajinta Maaddada ugu weyn ee midabaynta waa anthacyanine.
Radish Red Color waa budad-guduud-casaan ah, oo si fudud ugu milmi karta biyaha iyo aalkolada, laakiin kuma jiraan qashinka dareeraha Marka PH <7, xalku waa casaan. U-caabbinta midabka iftiinka iyo kuleylku waxay ku badan tahay heerka aashitada. Waxay waxtar u leedahay midabaynta cabitaanka iyo daawada. Ma ahan mid sun ku ah jirka bini-aadamka, waxaana loo sameeyay si heer qaran ah (lambarka caadiga ah GB6718-86).
Radish Red waa budo cas oo qoto dheer, wuxuu si fudud ugu milmi karaa oo keliya khamriga, laakiin sidoo kale biyaha.Waa mid aan ku milmi karin Saliida, mana nuugi karo qoyaan mana sameyn karo adag, Midabka dareeraha midabka ayaa isbedelaya PH kala duwan Midabka isbeddelaya laga bilaabo liin-casaan ilaa guduud ilaa aborigine ilaa buluug marka PH uu u dhexeeyo l-8 ， Waa gobol casaan ah marka PH ku jiro l-6 ， midabku wuxuu ku habboon yahay xasilloonida liquid Midabka dareeraha ah ee midabka leh wuxuu noqdaa buluug mana xasilloona marka PH uu ka sarreeyo 7. Midabka ma sii libdhi karo iftiinka hoostiisa muddo dheer． Midabka sidoo kale wuxuu leeyahay iska caabin wanaagsan oo heerkulka sare ah ， midabku ma beddeli karo waqti dheer karkaraya.
Midabka Radishka waxaa si weyn loogu isticmaali karaa nacnaca, keegga, sharaabka, khamriga, caanaha miraha, macaanka, hooseeya, jalaatada, cuntada qasacadaysan, bolse iyo kiniiniga sonkorta leh.
Markaad isticmaasho Radish Red, ku milmi midabka aalkolo yar ama biyo marka hore, ka dibna ku qas xalka walxaha cuntada. Tixraacyada adeegsiga waa sida soo socota:
KOOXDA: ku dar 50-500mg / kg, midabku waa casaan ilaa buluug.
CAKE: kudar 10-100mg / kg, midabku waa casaan casaan casaan ah.
DUQA: ku dar 10-100mg / L, midabku waa casaan ilaa casaan.
Khamri: kudar 1,000-2,000mg / L, midabku waa casaan.
MIDHAHA: ku dar 100-300mg / L, midabku waa casaan.
JELLY: kudar 10-100mg / kg, midabku waa casaan casaan casaan ah.
ICE-LOOLLY IYO ICE-CREAM: ku dar 100-700mg / kg, midabku waa casaan ilaa buluug.
SAUSAGE: kudar 10-100mg / kg, midabku waa casaan casaan casaan
KAADIINTA QALABKA: ku dar 50-500mg / kg.
[Habka farsamada] Waxyaabaha ceyriin ah → Kala jar jajab → Biyo dhex galay
[Adeegsiga] Lagu dabaqi karo cuntada, cabitaanka.
[Kaydinta] Ka ilaali hawada, iftiinka iyo kuleylka, Ku kaydi xaalad qabow.
Foosto balaastig ah oo wareegsan oo leh xirmo gudaha ah: 5kg, 10kg15kg, 30kg. Waxaan sidoo kale ku siin karnaa xirmo kala duwan iyadoo loo eegayo sheegashada macaamiisha.